Abakade bekwiwebhina, kusukela kwesobunxele nguNks Cathy Kodiemoka, uNks Nomfundo Mkhaba, noMnu Tinashe Njanji.
I-Centre for Civil Society (i-CCS) yaseSikoleni Sezezakhiwo neZifundo Zezentuthuko ibinewebhina edingide izinhlelo zokusabalalisa umgomo weCOVID-19.
Kulesisithangami bekukhona izinhlangano zomphakathi nezishoshovu ezifundisa ngomgomo nokuthi uhlelo lokugoma luhambe kahle futhi lutholwe yibona bonke abantu ngendlela efanele.
Iwebhina ibiphethwe nguMnu Mzamo Zondi we-Treatment Action Campaign (i-TAC) noNks Philisiwe Mazibuko, ilungu le-Right2Know Campaign. Phakathi kwezikhulumi bekukhona uNks Cathy Kodiemoka we-Human Rights Institute of South Africa (i-HURISA); uDkt Lucas Ngoetjana weKwaZulu-Natal Christian Council (i-KZNCC); uNks Nomfundo Mkhaba we-Waste for Change; uNks Ngazini Ngidi, ongumhlengikazi; noMnu Tinashe Njanji we-People’s Health Movement South Africa (i-PHM-SA).
‘Ukusatshalaliswa komgomo ebantwini abaseqhulwini abehlukene kulawulwa yi-Ministerial Advisory Committee (MAC). IKomidi liluleka uMnyango WezeMpilo kuzo zonke izindaba ezithinta ukwenziwa komgomo we-Coronavirus nokusatshalaliswa kwawo. Izindlela zokugoma zizogxila ekubhaliseni nasekubekiseni isikhala. Bonke asebegonyiwe bafakwa ohlwini bese benikwa ikhadi lomgomo elidingeka uma beya phesheya,’ kusho uKodiemoka.
Izikhulumi zivumelane ngokuthi kunesidingo esiphuthumayo sokuthi izishabasheki zomphakathi zizicije ngolwazi ngokugoma nangokutheleleka ngezifo bese zenza indlela yokuqaphela inzuzo eyenziwa yizinkampani ezikhiqiza imithi nemithetho ekhona.
UNgazini uthe nakuba ikhona inqubekelaphambili kodwa ‘Izinhlangano zomphakathi kufanele zilekelele emiphakathini ngokuyifundisa ngomgomo. Lokhu kuzonqanda ukubhebhetheka kwamampunge. Vele sibone kusabalala amampunge namanga ngokubhebhetheka kweCOVID-19 ezinkundleni zokuxhumana. Lolu lwazi aluvamile ukuhambisana nobufakazi besayensi futhi akulona olwemithombo ethembekile,’ kusho yena.
Izikhulumi zithe ukuqala kokusebenza kwendlela yokugoma abasebenzi bezempilo kungasiza ukwenza ngcono uhlelo lokugoma lwaseNingizimu Afrika uma sekudlulelwa ezigabeni ezilandelayo.